Trano - Mytika Speak
Mivondrona ny lojika sy ny fahatsapana
Tena tena izy
Flames Twin sy Fitiavan'Andriamanitra
Andriamanitra sy ilay ara-panahy
Toetra sy toetrany
Balance sy The Grey
Tany sy angovo mandrehitra
Lesona eo amin'ny fiainana
Fihetseham-po, lakile ary fanehoana
Karma, Reincarnation ary Extensions
Fomba fijery, fanelingelenana ary tandindona
Inona avy ireo fanazaran-tena ho an'ny lelafo kambana izay vao nifankahita?
Mety ho miralenta ve ny mirehitra kambana?
Inona no vitan'ny lelafo kambana natambatra?
Ahoana no ahafantarako fa misy tokoa ny lelafo kambana?
Betsaka ny fanazaran-tena ifandraisan'ny lelafo kambana mba hifandanjana sy hitombo. Ny pitsopitsony amin'ireo fanazaran-tena ireo dia mety homena ...
Ahoana no ahafantarako raha tena mahafantatra zavatra iray aho?
Misy fomba mora hahalalana ny tena zanako?
Ahoana no ahalalako raha nihaona tamin'ny tena Tenako na Ego aho?
Ahoana no hahatongavako ho empath?
Inona no atao hoe fahazavana?
Ahoana no hampijanonako ny fuse fohy?
Ahoana no tsy hijanonako ho mpanodikodina?
Misy tonga amin'ny fahafaham-po amin'ny fiainana ve?
Mihaona indray ve ny afo kambana amin'izao fotoana izao?
Ahoana no fomba hiomanako hihaona amin'ny lelafo kambana amiko?
Ahoana no ahafahan'ny fahalalana angovo lasa tafahoatra?
Ahoana no hahatonga ny angovo azo antoka hanjary tafahoatra?
Ahoana no mety hahatonga ny angovo milamina ho lasa tafahoatra?
Ahoana no hahatonga ny angovo mazoto hanjary tafahoatra?
Ahoana no ahafahan'ny angovo maniry ho lasa tafahoatra?
Ahoana no ahafahan'ny angovo manosika lasa tafahoatra?
Ego sy The Physical
Inona no nolovan'ny olona amin'ny ray aman-dreniny?
Mangataha torohevitra amin'i Mytika
Midira amin'ny klioba
Ho voalohany ho fantatrao rehefa mametraka valiny vaovao amin'ny fanontanianao ara-panahy izahay.
Araho i Mytika
Mytika Speak dia loharanom-pahalalana ho an'ireo izay mahatsapa fifohazana ara-panahy, fihaonan'ny lelafo kambana, mianatra maneho, mahita ny tena izy, ary lohahevitra maro hafa amin'ny fanomezana valiny amin'ireo fanontaniana ara-panahy.
Random ho anao
Inona no fifandraisana misy eo amin'izao rehetra izao sy ny Tany / Volana / Masoandro?
Maninona ny olona no tsy manaiky ahy?
Fa maninona no fanahy iray no misafidy ny hisaraka roa?
fahatsiarovan-tena amin'ny fahatsiarovan-tena fahatsiarovan-tena fitiavana masina hambom-pon'ny tafahoatra Andriamanitra Haiku aingam-panahy lesona fanehoana micropoetry fitomboan'ny tena manokana tononkalo tononkalo tononkalo fohy ara-panahy ara-panahy lesona ara-panahy Tena tena izy Afo kambana
Copyright © 2022 Mytika Speak. Zo rehetra voatokana. politika fiarovana fiainan'olona ary Fepetra fampiasana